ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်ကို ဘာသာတရာအနေဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း (၁) | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
မိုးအုံ့တဲ့ မနက် →
June 22, 2008 · 2:45 am
ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်ကို ဘာသာတရာအနေဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း (၁)
ဒေါက်တာ ကေသိရီ ဓမ္မနန္ဒ
အရှင်က၀ိဿရနှင့် သင်ကာ တည်းဖြတ်သည်။
ဧဟိပဿိကော ဘာသာပြန်စာစဉ် (၁)
ယနေ့ခေတ်တွင် အချို့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တို့သည် ထုံးတမ်းစဉ်လာသလောဆန်သော စာပေကို မနှစ်သက်ဘဲ အတွေးအခေါ်ဆန်ဆန် ခေတ်အမြင်ဖြင့် ရေးသားထားသော စာမျိုးကိုသာ ခုံမင်လျက်ရှိကြသည်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာစာပေနယ်တွင် အတွေးအခေါ်ဆန်ဆန် ခေတ်သစ်အမြင်ရှိသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာပေရေးသားမှုများ အားနည်းလျက်ရှိသည်။ အနောက်တိုင်း ဗုဒ္ဓစာပေနယ်တွင်မူ ဤကဲ့သို့သော စာပေမျိုး အများအပြားတွေ့ရှိရပေသည်။ ယခု ဘာသာပြန်ဆိုအပ်သော တရားတော်မှာ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၊ ဗုဒ္ဓမဟာဝိဟာရကျောင်းတော်၌ World Religions (ကမ္ဘာ့ဘာသာတရာများ) နှင့်ပတ်သက်၍ ရက်သတ္တ ၁၀ ပတ်ကြာ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော တရားစခန်းတွင် ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက၌ ထင်ရှားသော သီဟိုဠ်သား ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင် ကေ သိရီဓမ္မနန္ဒမထေရ်သည် What is Buddhism ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် ဟောကြားခဲ့သည်ကို မလေးရှားနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု အဖွဲ့အစည်း (BMSM) မှ Buddhism asaReligion ဟု တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ရိုးရှင်းပြတ်သားသော ဆရားတော်များကို ခေတ်အမြင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ဟောကြားရေးသားလေ့ရှိရာ ဘာသာရေးအတွေ့အကြုံ နည်းပါးသူ ခေတ်လူငယ်များအတွက် အကျိုးများလှပေသည်။ ယခုပြန်ဆိုအပ်သော စာအုပ်ငယ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ထုတ်ဝေသော စာစောင်တစ်ခုတွင် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
A simple but systematic enunciation of the features that makes Buddhismaunique teaching. A thought provoking book to be read by all.
ရိုးရှင်းသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအား ထူးခြားသာလွန်သော ဒေသနာတစ်ရပ်ဖြစ်စေသော ကြန်အင်လက္ခဏာများကို စည်းစနစ်ကျစွာ မြွက်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ် ထွက်ပေါ်စေသည့် လူတိုင်းဖတ်ရှုသင့်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။
မိမိသည်လည်း ဤစာအုပ်ငယ်သည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာစာဖတ်သူများအား တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် အကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့သဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပေသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပြန်ဆိုအပြီး၌ စာအုပ်သည် ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် ဆက်လက်ပြန်ဆိုမှု မပြုနိုင်ခဲ့ပေ။ စာအုပ်ကို ပြန်တွေ့သည့်နောက်ပိုင်း၌လည်း မအားမလပ်ရှိနေခဲ့ပါသည်။
တစ်နေ့တွင် မိမိ၏ ညီနောင်ရင်းပမာ ခင်မင်ရင်းနှီးသော အရှင်က၀ိဿရသည် ရောက်ရှိလာ�
��ပီး `ကိုယ်တော်၊ တပည့်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ စာအုက်ကလေးတစ်အုပ်ထုတ်ပေးရမယ့် အခြေအနေရှိနေတယ်။ သင့်တော်တဲ့ စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ကို တစ်ပတ်အတွင်း ဘာသာပြန်ပေးပါ´ဟုတောင်းဆိုလာပါသည်။ သို့ရာတွင် မိမိအနေဖြင့် `ဧဟိပဿိကော ဓမ္မဒူတလုပ်ငန်းစဉ်´ (Ehipassiko Dhammaduta Project) အတွက် လိုအပ်နေသော မှတ်တမ်းရေးရာများ အချိန်မှီပြုစုရေးသားနေရခြင်း၊ တစ်ပတ်အတွင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြန်ဆိုပေးရမည်ဆိုသည်မှာလည်း ၀န်လေးဖွယ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဒေါက်တာ ကေ သိရီဓမ္မနန္ဒ၏ Buddhism asaReligion စာအုပ်တစ်ဝက်ခန့်အား ပြန်ဆိုထားသည်ကိုသာ သူကိုယ်တိုင်တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေရန် အကြံပြုလိုက်ရပေသည်။ ဤကဲ့သို့ အဆောတလျင် စီစဉ်ရိုက်နှိပ်မှုဖြင့် ဤစာအုပ်ငယ် ထွက်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မူရင်းစာအုပ်မှာ တိတ်ခွေမှတဆင့် ကူးယူတည်းဖြတ် ရိုက်နှိပ်ထားသော ဟောစဉ်တရားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အချို့နေရာများတွင် အရေးအသားပိုင်း၌ ရှေ့နောက် အဆက်အစပ် မညီမှုများ၊ အဆီအငေါ်မတည့်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ အကျိုးများမည်ထင်လျှင် အချို့သော ဟောကြားချက်များကို ချဲ့ထွင် ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သော အချို့အရေးအသားများ၊ ဝေါဟာရများကို အောက်ခြေမှတ်ချက်၌ အကျယ်ဖွင့်ဆိုပြထားပါသည်။ မိမိသည် ဘာသာပြန်ဆိုသည့် အလေ့အထ နည်းပါးလှသည်ဖြစ်ရာ စေတနာကိုသာ အရင်းခံပြီး ကြိုးပမ်းမှုတွင် တိမ်းစောင်းလွဲချော်မှုများ၊ မပြည့်စုံမှုများရှိခဲ့လျှင် မေတ္တာဖြင့် သည်းခံဖတ်ရှုကြရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ပြန်ဆိုရန် ကျန်ရှိနေသည့် နောက်ပိုင်းအခန်းများကိုလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ဆက်လက်ပြန်ဆိုသွားပါမည်။